FSX is ashaya lapho egijima Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 flight mahhala futhi yiLungu LePhalamende Sessions. Ingabe kukhona ukulungisa?
Isinyathelo 1: ThwebulaUIAutomationCore.dll
Isinyathelo 2: ukhiphe ifayela ZIP ubeke UIAutomationCore.dll ekhishwe impande ukufakwa ifolda wakho FSX lapho ihlala khona fsx.exe ifayela. Qiniseka FSX is hhayi egijima.
Ngemva lesi senzo, qala FSX futhi uyothola ukuthi sizibulale ukubukwa e FSX, akabange ekugcineni kubangela FSX iphahlazeke.
Ngaphandle kwalokhu fix, FSX bayaqhubeka kanye uzobe "kuphelelwe yisikhathi" in a multi umdlali session. Ungasebenzisi kwezinye izinguqulo UIAutomationCore.dll, njengoba le nguqulo kuba version kuphela ukuthi uzoyeka izingozi.